Tsy ho mora ny fanapahan-kevitra eo na ho inona na ho inona, hoy ny filoha. Raha ny any ivelany, dia niha nitombo ny fepetra, nitombo be ny olona voa, ny ao Maorisy dia avo roa eny amin’ny antsika no voa, ary efa maro no maty. Eto amintsika 70 no voa, ary tsy mbola misy ny maty, hoy izy. Tsy miteny aho hoe: tsy tokony hitandrina.
Andry 3 lehibe
Hamory ireo filohana andrim-panjakana rehetra anio ny filoham-pirenena, hiresaka amin’ny filoham-piangonana, amin’ireo olom-boafidy, hifanakalo hevitra amin’ireo tompon’andraikitra any amin’ny faritra misy ny covid-19. Vita izay dia hiresaka amin’ireo profesora mahafantatra ny valan’aretina. Hisy ihany koa ny filankevitry ny minisitra anio. Goavana ny adidy iantsorohan’ny filoha amin’izay fanapahan-kevitra ho raisina eo, ary na dia maro be aza ireo olona hifandinika aminy sy hanolo-tsaina azy, dia azy ny teny farany.Tsy maintsy lanjalanjaina ny lafiny ara-pahasalamana aloha voalohany indrindra satria valan’aretina efa mamely izao tontolo izao no fahavalo atrehana,Ny fitaovana, ny olona miasa eo amin’ny sehatry ny fahasalamana ary indrindra fa ny paikady.Faharoa, tsy azo hamaivanina ny lafiny toekarena, satria iaraha-mahalala ihany ny fahasahiranan’i Madagasikara koa raha mbola mitohy ny tsy famokarana dia ho raharaha ary tsy maintsy hisy fiantraikany ratsy amin’ny sandam-bola sy ny ati-vilanin’ny isan-tokantrano; tsy afaka ny hizara vola ho an’ireo sahirana foana ny fitondram-panjakana fa misy fetrany io.Fahatelo, tsy maintsy mitandrina ny filoha eo amin’ny sehatra politika fa raha diso fanapahan-kevitra eo izy dia hampandringa ny ambim-potoana hiasany izany ary mety tena handetika azy mihitsy aza.Raha mandray ny fanapahan-kevitra mety sy mahasoa ny rehetra kosa izy dia hivoaka ho mpandresy ka hahavita hanarina sy hampandroso ny firenena.Mazava anefa ny resaka eto fa tsy misy vahaolana mety sy hahafapo 100% ny rehetra amin’izao toe-draharaha izao fa tsy maintsy marimaritra iraisana no hahatafavoaka.
Reko ny fitarainan’ny olona amin’ilay hoe ny hoanina anio tadiavina anio, hoy i Andry Rajoelina. Manao ezaka ny fitondrana hanao ilay hoe tsinjo ho an’ny besinimaro. Eo no mandinika indray hoe: Ara-toekerana ve dia zakan’ny firenena Malagasy ny miatrika izao. Araka ny fandaminana izay tiantsika hapetraka mety ho vitantsika ve ny fifehezana ara-tsosialy? Ara-pahasalamana dia mila fakafakaina tsara ny tsy hiparitahan’ny valan’aretina. Fa raha izaho manokana no anontaniana tao anatin’izay 15 andro izao dia hitako hoe nanao ezaka ny rehetra, na eo aza ny saonjo iray lohasaha. Ny ankamaroan’ny olona dia niray fo sy saina. Eto aho dia milaza amin’ny Malagasy, hoy ny filoha fa raha mihoatra ny 300 ny tranga dia miditra stade 2 isika, raha mihoatra ny 50 ny maty dia efa sarotra ny raharaha. Androany dia voafehy kanefa io miovaova, raha ny fanazavany. Efa tody tany Ambatomanga, Antsiranana, Nosy be, Fianarantsoa, Morondava, Toamasina , ny valan’aretina hoy ny filoha. Mila jerena sy fakafakaina lalina izany rehetra izany, ka amin’ny alahady ny tenako mifanao fotoana amin’ny Malagasy, hoy i Andry Rajoelina.